Korea Atsimo : Ny fiasan’ilay teoria hoe misy fiantraikany amin’ny maha-izy ny tsirairay ny sokajin-dràny · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Audrey Lambert
Voadika ny 14 Janoary 2019 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 日本語, македонски, Español, русский, polski, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, Italiano, Ελληνικά, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2011)
Firenena aiza no hoe mahafantatra ny sokajin-dràny daholo ny olona? Ny valiny tsy maintsy hoe i Japàna sy Korea Atsimo. Lasa karazana lohahevitra ho fananihany [teny koreàna] ny antony tena mahatonga ireo firenena ireo liana be amin'ny fahafantarana ny sokajin-drà, indrindra fa rehefa ampitahaina amin'ireo firenena tandrefana izay betsaka amin'ny olona no tsy mahafantatra akory ny azy – ary tsy miraharaha izany mihitsy aza.
Na dia mivoitra manerana an'i Azia aza, tsy nahazo fironana be toy ny ao Japàna sy Korena Atsimo ny “teorian'ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny olona iray”, arahana boky, na tantara an-tsary sy vokatra hafa amidy eny an-tsena, izay mifototra amin'io hevitra io daholo. Ao amin'ny Facebook amin'ny teny koreàna, azon'ireo mpikambana atao mihitsy ny mametraka ny sokajin-dràny eo amin'ny mombamomba azy ho fanampin'ireo torohay sasany manandanja momba azy.
Na somary lefilefy aza io aingintraingitra io tato anatin'ny taona vitsivitsy, mbola mitoetra ho matanjaka foana ny lazany ary somary mitovy amin'ny tononandro any amin'ireo firenena tandrefana.
Ny teorian'ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny olona iray
Araka ilay teoria, ny rafitra ABO famaritana ny sokajin-drà dia ahafahana mamantatra ny maha-izy azy ny olona iray, ny toetrany sy ny fahaizany mifangaro amin'ny hafa. Ireto manaraka ireto ny mpamaritoetra mahalaza tsara ireo toetran'ny sokajin-drà tsirairay : ny ao amin'ny sokajy A dia tsara fanahy sy mahakolokolo zavatra, saingy saronkenatra, ny ao amin'ny sokajy B dia tia mamorona saingy be hanta loatra, ny ao amin'ny sokajy O dia mora iarahana monina saingy tsy mahay mandamina, ary ireo ao anatin'ny sokajy AB dia olona misaina kokoa sy mpikajy.
Ireo sary etsy ambany, noforonin'ilay mpanao sary Park Dong Sun, dia mampiseho ny fomba ataon'ny sokajin-drà tsirairay raha tafalatsaka anaty toedraharaha iray voafaritra. Ny maribolana amin'ireo sary nataon'i Park momba ny toetra maha-izy ny tsirairay ampifandraisina amin'ny sokajin-dràny dia matetika avoaka amin'ilay vavahadin-tserasera goavana ao Korea Atsiùmo, Naver.com [koreàna].
Na kianina aza ny asany hoe matetika mampiseho zavatra mifamahofaho momba ny maha-izy ny olona, dia tena lalain'ireo Koreàna tokoa. Ny sary eto ambany dia avy amin'ny bilaoginy [koreàna] fa tsy avy amin'ny pejiny ofisialy momba ny sary ao amin'ny Naver [koreàna]. Ny ankamaroan'ireo sary nataony azo raisina ety anaty serasera dia efa navoaka sy naloan'ny Naver vola avokoa, ary arovan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona.
Ireo sokajin-drà A,B,O manao fialantsasatra lohataona : B dia aseho ho toy ny mankamamy tanteraka izany fotoana izany, manao ny azy koa i A mba hanorina lapa vita amin'ny fasika, ary AB somary mihatakataka amin'ny rehetra. Sary avy ao amin'ny bilaogin'ilay mpanao sary, Park (CC BY NC ND).
Mitaraina moramora momba ilay nanao harona ilay tia mandamina indrindra, ny sokajy A, AB miampanga ny O sy B ho diso fanao zavatra. O sy B sondriana milalao ao anaty rano. Sary avy ao amin'ny bilaogin'ilay mpanao sary, Park (CC BY NC ND).
Mampangatsiatsiaka tena ny lasopy misy ronono O, mipetraka indrindra manoloan ailay milina mandeha herinaratra mitsotsoka rivotra, mitaraina mafy sy isaky ny mihetsika momba ny toetry ny andro. B, tofoka, efa mila hidaroka an'i O. AB tsy miraharaha na iza na iza. Sary avy ao amin'ny bilaogin'ilay mpanao sary, Park (CC BY NC ND).
Ny sokajy AB, ilay tsy fahita firy, dia aseho mandrakariva ho toy ny voahilikilika, indraindray aza toy ny vahiny. Eto amin'ity sary ity, mitondra OVNI iray i AB raha ireo sisa kosa mipetraka ety amin'ny tany. Sary avy ao amin'ny bilaogin'ilay mpanao sary, Park (CC BY NC ND).
USB vitsivitsy maka ny toeran'ireo mpisehatra ao anatin'ireo sary momba ny sokajin-drà. Sary avy ao amin'ny bilaogin'ilay mpanao sary, Park (CC BY NC ND).
Fialamboly tsy misy tsiny sa ny sisa tavela matroka?
Na tsy misy tsiny aza – safidiana ireo sary mahafinaritra mba ho entina manazava ilay teorian'ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny olona iray – ilay teoria fotsiny dia efa sisa tavela taminà lasa matroka. Matetika izy io no ampifandraisina amin'ny fanavakavahana siantifika, tany amboalohany nampiasain'ireo Nazis, avy eo ry zareo imperialista japoney mba hanapariahana ilay hevitry ny fahamboniana manoloana ireo foko na firenena isankarazany nandritra ny taona 1920 hatramin'ny 1930.
Rehefa hitan'ireo siantifika aotrisiàna ny fisian'ny sokajin-drà efatra, dia tena zava-baovao nahavonjy ain'olombelona marobe tokoa io nanomboka teo, mba tsy hampidirana rà tsy mifanaraka amin'ny azy ao amin'ny olona tsirairay mila izany. Kanefa, nisy fandalinana taty aoriana nampivoitra fa tsy mitovy ny tahan'ny fisian'ireo sokajin-drà samihafa ireo manerana ny tany, ary io no nanosika ny mpikaroka sasany mpanavakavaka sy imperialista hamoaka tatitra momba ny teorian'ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny olona iray.
Misy fandalinana iray malaza notontosain'ny profesora japoney Furukawa, nifantoka tamin'ireo toetra ara-piaviana ananan'ireo Taiwanais izay nitroatra niady tamin'ireo japoney imperialista. Famintinana nataon'ilay mpikaroka ny hoe: satria maherin'ny 40 isanjato amin'ireo Taïwanais no manana ny sokajin-drà O, izay heverina fa ny tsy mora folahina indrindra, mila tapohan-dry zareo ilay “rà mpikomy” ao amin'ny firenena, amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fifanambadiany amin'ireo Japoney.
Na dia marobe aza ireo japoney teny amin'ny oniversite no nisalasala momba ny tena mampitombina ilay teoria, noho ny tsy fahampian'ny fototra siantifika ijoroany, nahavita nivelona ihany ilay izy noho ny fisian'ireo fanontàna mampientanentana, narahan'ny tohana nataon'ireo media izay nampiseho mandrakariva ny fahalinany tamin'izy io. Teraka tany amin'ny faramparan'ny andiantaona1990, nipàka hatrany Korea Atsimo ity aingintraingitra ity, lasa tena nalaza be nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, ary tsy nitsahatra intsony nanomboka teo.
Ilay biloagera koreàna tatsimo Age of Mass Production Type Romance no taratry [koreàna] ny fahatsapàna ankapoben'ireo Koreàna momba io toeria io. Na miaiky aza izy fa misy tsy fahampiana porofo siantifika, nandresy lahatra azy ny zavatra niainany ka ilazany fa fitaovana iray tsy azo dinganina io ho entina manasokajy ny olona.
Na eo aza ireo kiana rehetra, hita ny fahamarinan'ilay teoria amin'ny ankamaroan'ny tranga. Misy, mazava loatra, ny tranga maningana. Nahita olona iray anatin'ny sokajy A aho, mahay mitily be lery, ary olona iray hafa anaty sokajy O, tena tsy mahay mandefitra sy tsy azo iaraha-monina. […] Saingy rehefa misy zavatra iarahana amin'ny hafa, tsy dia misy masontsivana metimety kokoa afa-tsy ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny olona. […] Betsaka zavatra tsy afaka refesina eto an-tany na tsy voazavan'ny siansa tsotra izao.
Fahiny dia mafy tsy azo nahifka ny finoan'ilay bilaogera Unalpha ny fisian'ny fiantraikan'ny sokajin-drà amin'ny maha-izy ny olona, saingy tsy izany intsony ankehitriny. Alalininy [koreàna] ny zavamisy hoe ao anatin'ireo fitaovana isankarazany nahatonga io teoria io ho ninoana dia misy ny fomba famaky mangatsiaka izay ivondronanà teknika vitsivitsy fampiasan'ireo mpiresaka amin'ny fanahy, ireo mpilaza ny hoavy, ireo mpisoloky, mba handresena lahatra ny olona fa hoe mahatakatra izay manjo ny olona ry zareo:
Olona sahisahy ianao, saingy ao anaty lalinao ao ianao dia olona mailo fatratra ary mpikolokolo, ka miverina misaina ireo fanapahankevitra mety ho noraisinao no sady manontany tena raha toa ka tsara ilay safidy nataonao. Mahafinaritra ianao rehefa miaraka amin'ny hafa ary mahakolokolo fifandraisana tsara amin'izy ireny, saingy ilana fotoana ela ny fahaizana tanteraka ny toetranao. […] Mety tsy maintsy nihatoka kely ny lohanao teo am-pamakiana ity andinin-tsoratra ity. Izany dia satria manana lafy maro maha-izy azy ny olombelona. Na ilay zalahy sahisahy aza mety ho sahiran-kevitra ary na ilay olona tsy miraharaha iny aza indraindray mety handamindamina tsara mihitsy.
Toy ny nitondra vokatra Barnum ireny fehezanteny ireny, tamin'ny fanolorana famaritana iray tsy feno, izay toa hevitra manokan'ny tena saingy azo ampiharina amin'olona marobe. Ilay bilaogera Wawoooo, izay mampiasa ohatranà mpianatra iray nandà ny tsy hilaza ny heviny nanoloana ny iray kilasy noho izy avy amin'ny sokajy A, sokajin'ireo saronkenatra, dia manameloka :[koreàna] ny anjara toerana lalaovin'ny fiaraha-mitantana harena ao anatin'ny fiarahamonina koreàna mba handrisihana ny tsirairay hino io teoria io:
Ao Korea Atsimo sy ao Japàna, firenena roa tena mamàaka lalina ao tokoa ny fiaraha-mitanana ny harena, tezaina ny olona ary beazina mba hanome lanja ny vondrona fa tsy ny tena manokana. Zavadehibe ny fahaizana mifanaraka amin'ny hafa sy ny fomba fijerin'izy ireo anao. [Rehefa tafalentika tsara ao anatin'ny fiarahamonina io finoana ny fiantraikan'ny sokajin-drà io amin'ny maha-izy ny olona io], azo trandrahina amin'ny faratampony ny fiantraikany, indrindra fa hoe matetika ny tsirairay dia voatery manaiky ny fomba fijerin'ny hafa azy, ny fomba fijerin'ny lehibeny sy ny vondrona misy azy, ary dia mihetsika mifanaraka amin'izany izy ireo.
Hong Kong (Shina) 1 andro izay